~ ဏီလင်းညို ~: စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ဆိုတာ...
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 11:21 AM
ဒါကြောင့်လဲ Home sweet home လို့ပြောကြတာပေါ့ မောင်ဏီရေ... အစစအရာရာ ပြီးပြည့်စုံပြီး စိတ်ချမ်းသာမှု အပေးနိုင်ဆုံးနေရာလေးက နွေးထွေးတဲ့အိမ်လေးပါ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆန္ဒအတိုင်းအကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ။ စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ တထပ်ထဲကျဘို့ဆိုတာ အင်မတန်ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း အကောင်အထည် မဖော်ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီစိတ်ကူး အပေါ် တပ်မက်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လောင်ကျွမ်း၊ လေးလံပြီး တနုံ့နုံ့နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ တွေးမိတယ် ကိုဏီရ၊
အခုလို လုပ်ဖြစ်သွားတော့ စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ကြားက လေဟာနယ်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခံစားသိနဲ့ သိခွင့်ရတဲ့အပြင် ရည်မှန်းထားတာ တစ်ခုကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ခဲ့တာမို့ အမြတ်ပါပဲဗျာ၊ အဲ… ဘောင်းဘီလေး ညစ်ပတ်သွားတာတော့ ဘေးထွက်အကျိုးဆက်လို့ပဲ ဆိုပါတော့လေ…။းD
ကိုဏီးရေ စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ကြားက စိတ်ကလေးကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသွားတာလေ ပေါ်လွင်လွန်းတယ်
မည်သို့ဆိုစေ..."အိမ်" မှာသာလျှင် ကိုယ့်စိတ်ကူး အနည်းငယ်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရနိုင် မည်သာ။ စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ကြား ကွာဟချက်လေးလဲ ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ် ကိုဏီလင်း :)
(ညီမအိမ်ဝန်းကျင်ကတော့ တိတ်ဆိတ်တယ်၊ အိမ်ရှေ့မှာ ပိန္နဲပင်ရှိတယ်၊ ကျေး၊ငှက်သံလေးတွေနဲ့ နေပျော်တယ်၊ ဒါကြောင့် ညီမကတော့ လက်ရှိအိမ်ဝန်းကျင်မှာ စာဖတ်ရတာကို အရမ်းနှစ်သက်တယ်၊)
စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှု့သွားပါ၏ ။ စာအဆုံးတွင် နှစ်သက်ခြင်းအပြုံးတစ်ခု ပြုံးလိုက်ပါတယ် ။ စိတ်ကူးနှင့်လက်တွေ့တို့သည် တကယ်တမ်းတွင် အမှန်ကွာခြားတတ်ကြောင်းကို ဒီနေ့တွင် လက်တွေ့ အနေဖြင့် ကျွန်တော်ထပ်မံခံစားသိရှိခဲ့ရပြီဖြစ်၏။ ။ဆိုသည့် အသိလေးကိုလည်း ရရှိလိုက်ပါသည် ။
တီတင့်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကောင်းတယ်ခေါ်မလားပဲ ဘလော့ဂါတော်တော်များများ ပို့စ်ပြန်တင်နေကြတာကိုမြင်ရတော့ ၀မ်းသာမိတယ်...။ ဏီဏီ့ဆီက အချစ်ဝတ္ထုချိုချိုလေးတွေဖတ်ချင်နေတယ်..စောင့်နေမယ်နော်...။
စိတ်ကူးနှင့်လက်တွေ့တို့သည် တစ်ကယ်တမ်းတွင် အမှန်ကွာခြားတတ်ကြောင်း………
ဟုတ်တယ်ကိုဏီ...သည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်လည်း အတော်များများ တွေးကြည့်ဖူးတယ်...တစ်ချို့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေဟာ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရင် ထင်ထားသလောက် ပျော်ဖို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့...ဒါပေမယ့် ကိုညီလင်းသစ်ပြောသလို အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ရင်လည်း ရင်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့နဲ့ ခံစားရဦးမှာ အမှန်ပဲ...
အခုချိန်မှာပဲ လုပ်လို့ရတုန်းလုပ်ထား နောက်ပိုင်း မလွတ်မလပ်တွေနဲ့ဆို အဲ့တာတွေအဆင်မပြေတော့ဘူးးး)))
ကိုဏီ့ စိတ်ကူးလေးတွေက အေးချမ်းလိုက်တာ ညီလည်း အဲ့လိုစိတ်ကူးလေး ရှိသား ဒါပေမယ့် လက်တွေ့နဲ့ စိတ်ကူးကတော့................................
ကိုဏီရေ တကယ်လည်းမှန်နေတာကို စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တာတွေရှိပြီး ဖြစ်မလာတာတွေကများနေကြတယ်လေ
ဒါပေမဲ. ကိုဏီဖြည်.တွေးရမှာက အားလုံးကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေမဲ. ဖြစ်သင်.သလောက်တော. ကိုဏီ.စိတ်ကူးတွေဖြစ်လာခဲ.တယ်လေ
ကိုဏီ့ စိတ်ကူး နဲ့လက်တွေ့ကွာခြားချက် ကို ဖတ်ရင်း စပ်ဆက်အတွေးတွေတောင် ရလိုက်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ဘဝ နဲ့  ပက်သက်တဲ့ စိတ်ကူး ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖြစ်အုန်း မယ်ဆိုရင်အကောင်ထည်ဖေါ် လုပ်ဆောင်ခွင့် ရတဲ့အချိန် တကယ်ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ ကိုပါ စိတ်ကူးထဲ ထည့်ပုံဖေါ်ကြည့် ရင်း စိတ်ကူး နဲ့လက်တွေ့ အတတ်နိုင်ဆုံး သဟဇာတဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရင်း စိတ်ကျေနပ်မူ့ရနိုင်ပါစေကြောင်း။
ကျွန်တော်လဲ တခါတခါစိတ်ကူးထဲကအကြောင်းအရာလေးတွေမလုပ်ရကောင်းလားဆိုပြီး ခံပြင်းမိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အခွင့်အရေးရလို့လုပ်မိတော့လဲ..တခါတခါ အကိုရေးသလိုပဲ စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့က ကွာလို့ :)
ကိုယ်တွေ့လေးကနေ နှစ်သက်စရာ စာလေးတစ်ပုဒ်ထွက်လာတယ်။ စာလေးတစ်ပုဒ်ကနေ မှတ်သားစရာ အသိလေးတစ်ခု ရလိုက်တယ်။ စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ ဘယ်တော့မှ တစ်ထပ်တည်း မကျဘူးတဲ့..။ နှစ်သက်စွာ ဖတ်သွားပါတယ် ကိုဏီရေ..။
စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ထပ်တူကျဖို့ အမြဲကြိုးစားနေရပါတယ် ကိုဏီရေ
စိတ်ကူး နဲ့လက်တွေ့ကွာခြားချက်က တကယ်ကိုဆိုးလှတယ်(ကိုယ်တွေ့)
​မှော်​ဘီလို​နေရာက ခြံ​လေးထဲ ပက်​လက်​ကုလားထို​င်​နဲ့ဖတ်​ ​ရေ​နွေးအိုး ရယ်​ ပဲ​ကြော်​သုတ်​ရယ်​ မိုက်ာ့ပါ့